नेपाल आज | ओलीको प्रचण्डलाई प्रतिप्रश्न, ‘राजीनामा राजी नभई दिने चिज हो र ?’
ओलीको प्रचण्डलाई प्रतिप्रश्न, ‘राजीनामा राजी नभई दिने चिज हो र ?’
नेपाल कमुनिस्ट पार्टीभित्र सत्ता संघर्ष चरम उत्कर्समा पुगेको समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीबिच बालुवाटार बैठकमा प्रचण्डले राजीनामा गर्ने की नगर्ने निधो चाहियो भनेर सोधे ।
ओलीले निधो कति पटक दिरहनु पर्ने हो र भनेर झर्किए । उनले भने, "तपाईंलाई राजिनामाको अर्थ थाहै होला, राजी भएर दिने ! म राजी छैन । के गर्नु पर्ने हो गरे हुन्छ।" केहीबेर
दुवै जना मौन बसे ।
त्यसपछि प्रचण्ड बोले, उसो भए सीसीले गर्छ । ओलीले सोधे कताको सीसी (कसले दिएको रक्सी?) ले । प्रचण्डले 'तपाईंपनि' भने तर थप केही भनेनन ।
पार्टी फुटको संघारमा पुगेको भन्दै संकट टार्नका लागि सहमतिको जिम्मा ओली- प्रचण्डलाई दिइएको थियो। अध्यक्षद्वय सहमतिमा नपुगे पनि पार्टीका केही नेताहरु फुटबाट जोगिएको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन भन्दै नेता कार्यकर्ताहरुले खबरदारी गरिरहेका छन्। तर ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदबाट राजीनामा नदिने भएपछि नेकपा फुट निकट पुगेको हो ।
स्थायी समितिको बैठक सरेको सरै गरे पछी प्रधानमन्त्री केपी ओली बिजय भावमा छन । उनले आफूनिकटहरूको छलफलमा प्रचण्ड समुहको हुति नभएको जिकिर गर्दै नअलमलिन आफू निकटकालाई सुझाब दिएका छन। बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहितको छलफलमा उनले प्रचण्डको छलछामले केही ननाप्ने टिप्पणी गरेका हुन । ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहलाई मुसाको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘मुसा एताउता गर्दैमा बिरालो नतर्सिने भन्ने अब त बुझे जस्तो छ । खेलाई खेलाई खत्तम पार्ने हो ।’ प्रचण्डलाई बिरलाले मुसा खेलाए जस्तो खेलाइदिने ओलीको दाबी रहेको बुझिन्छ।
र यो पनि हेर्नुहोस्:
फेरी फुट नजिक नेकपा, एमाले ब्युत्याउने ओलीको धम्की